बिदेशमा भएका अाफ्नो श्रीमानलार्इ फोन गरेर श्रीमतीले भनिन्, ‘म त संसार छोडे है’ ! – Online Khabar 24
बिदेशमा भएका अाफ्नो श्रीमानलार्इ फोन गरेर श्रीमतीले भनिन्, ‘म त संसार छोडे है’ !
September 21, 2021 by admin admin
मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरमा एक युवती आफ्नै कोठा भित्र मृ’तावस्थामा फेला परेकी छन् ।
आइतबार बिहान ७ बजेतिर कोठाभित्र चु’कुल लगाएको अवस्थामा स्थानीय २४ वर्षीया रोजिना गिरी मृ’तावस्थामा फेला परेकी हुन् ।
शनिबार साँझ सलकपुर बजार घुमेर फर्किएकी युवतीको श’व आइतबार बिहान सलको पा ‘सो ल’गा’एर झु’ ‘ण्डिएको अवस्थामा भेटिएकी हुन् । छिमेकी गोविन्दबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएपछि घ’ट्ना बाहिर आएको हो। ‘भित्रबाट चुकुल लगाएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘मेरो रोहबरमा प्रहरीले ढोका फु’टा’एर भित्र पस्दा श’व भेटिएको हो ।’
उनका अनुसार रोजिनाको अनुहारमा नि’ल डा’म छ ।आइतबार नै श’व पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइएको छ । आज श’वको पोस्टमार्टम हुनेछ । रिपोर्ट आएपछि घट’नाको विवरणबारे जानकारी पाइने भएको छ ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरका विनोद काफ्ले र उर्लाबारी नगरपालिका दुर्गापुरीकी रोजिना गिरीले गत वर्षमात्र आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा रुपान्तरण गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट भएको चिनजानलाई विवाहमा रूपान्तरण गरेको एक वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै पति–पत्नीबीचको बिछो’ड भएको छ ।
केटीएम दैनिकका अनुसार विनोद विवाह गरेर रोजिनालाई घरमा राख्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका थिए । त्यहाँ काम गरिरहेका उनले शनिबार बेलुका रोजिनासँग फोनमा कुरा गरे । रोजिना पनि शनिबार सलकपुर बजारमा किनमेल गरेर फर्किएकी थिइन् ।
विनोद सँगको कुराकानीमा रोजिनाले पटक–पटक आफू पी डामा रहेको भन्दै दे’हत्या’ग गर्ने निर्णय सुनाइन् ।रोजिनाले पीडाको विषयबारे कुरा गरिनन् । दे’हत्या’ग गर्ने रोजिनाको निर्णबारे सुरुमा त विनोदले विश्वास गरेनन् । तर पटक–पटक उनले म म ‘र्छु भनेपछि विनोदले सम्झाए ।
अनेकन आग्रह गरे । तर रोजिनाले ढिपी क’सिरहिन् । कुराकानीपछि विनोद सुते । बिहान फोन गरे । उठेन । म्यासेज पठाए । जवाफ पाएनन् । अनि अकाउन्ट खोलेर हेरे । त्यहाँ पनि अनलाइन पाएनन् ।एकैछिनमा परिवारबाट फोन आयो । परिवारले रोजिना रहिनन् भन्दा विनोद छाँ’गाबाट ख’सेज’स्तो भए ।
अनि उनलाई परिवारले रोजिनाको माइतीपक्षमा सूचना पुर्‍याइदिन भने । विनोदले सोहीअनुसार माइती पक्षसँग कुरा गरे । उनीहरूको दुई परिवारबीच सम्धीभेटसमेत भएको थिएन । यसैले उनीहरूबीच प्रत्यक्ष कुराकानी हुन नसकेको बताइन्छ ।यता, माइती पक्षले रोजिनाले दे’ह’त्या’ग गरेको नभई ह’ ‘त्या हुनसक्ने आँकलन गर्दै प्रहरीमा कि’टानी जाहे’री दिने तयारी गरेका छन् ।
‘मलाई पनि हिजो बिहान यसबारे खबर आयो । तत्काल भिनाजू (विनोद) लाई म्यासेज पठाएँ । उहाँले फोनमा रोजिनाले छोडेर गएको भन्दै वि’रह पोख्नुभयो । तर उहाँको पनि निष्क’र्ष दे’हत्या’ग नै हो भन्ने छ । तर दिदीको अनुहार र शरीरमा नि’लडा’म छ ।’
उनका अनुसार हालैमात्र उनीहरूले सलकपुरको उक्त घर बेचेका रहेछन् । घर बेचेको पैसामा कि’चलो हुँदा घ’ट्ना भएको हुनसक्ने उनको आ’शङ्का छ । ‘त्यस्ती सोझी मेरी दिदीले त्यस्तो क’ठोर निर्णय लिन सक्दिनन्’, उनले भनिन्, ‘भिनाजु पनि आज फर्किँदै हुनुहुँदोरहेछ ।
पो’स्टमा’र्टम रिपोर्ट आएपछि थप सत्यता बाहिर आउला । तर उनको ह’ ‘त्या भएको हुनुपर्छ ।’शवको प्रकृति हेर्दा दे’हत्या’ग गरेको हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । कोठामा भित्रबाट चु’कुल ल’गाएर लोबेडमा घो’प्टो परेको अवस्थामा मृ’त भेटिएको उनको भनाइ छ ।
शरीर लोबेडमा रहेको भएपनि फे’नमा सल बाँ’धि’ए’को र कोठाको चु’क्कु’ल भित्रबाट लगाएको पाइएकाले देह’त्या’ग गरेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले भने झु ण्डि’ए’का कारण र’ग’त सो’हो’रि’ए’र नि’ल’डा’म हुनसक्ने जनाएको छ ।
यता, माइतीपक्षले भने रोजिनाको दे’हत्या’ग नभइ ह’ ‘त्या भएको हुनसक्ने आ’शङ्का गरेको छ । अनुहारमा निलडा’म प्रष्ट देखिएको र शरीरमा पनि डा ‘म देखिएकाले दे’हत्या’ग नभइ ह’ ‘त्या हुनसक्ने माइती पक्षको आ’शङ्का छ । यो खबर इ सिधाकुराबाट साभार गरियको हो ।
Prevमहिलालाई कस्तो अवस्थामा यौ,’न प्रस्ताव राख्ने ? जान्नुस
nextटिकटक बाट दिनमै लाखौ कामाउने अंशु बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म (भिडियो हेर्नुस्)